La macaamilka Korea-da Waqooyi
Kuuriyada Koofureed ayaa sii wadda in ay ahmiyaddeeda koowaad siiso hubka iyo barnaamijkeeda gantaallada baalistiga, taasoo khatar ku ah ammaanka gobolka iyo kan caalamka, iyo sidoo kale kan shacabka Kuuriya, sidaasi waxaa yiri Wakiilka Gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi Sung Kim.
Isaga oo wariyaasha kula hadlayay Washington, Kim ayaa hoosta ka xarriiqay in Pyongyang ay tijaabisay ilaa 13 gantaal oo kuwa ridda dheer ee baallistigga ah tan iyo billoowga sannadkaan 2022, ugu yaraan saddex ka mid ah ayaa ahaa kuwa isaga kala goosha qaaradaha. Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa ku bixisay kheyraadkeeda xadeysan maalgelinta hubkeeda sharci-darrada ah “xitaa xaaladda bani’aadannimo ee dalka oo ka sii dareysa meel xunna mareysa, ficillada Pyongyang ayaa halis weyn ku ah xasilloonida gobolka,” ayuu yiri Wakiilka Gaarka ah Kim.
Xilli Kuuriyada Waqooyi ay jebisay dhowr qaraar oo kasoo baxay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, ayay Dowladda Mareykanka oo kaashaneysa xulufadeeda iyo bah-wadaagteeda uga jawaabayaan dadaal lagu xajinayo halista millatari isla markaana lagu xadeynayo horumarinta barnaamijka gantaallada Kuuriyada Waqooyi, iyadoo isla markaana ay furanyihiin albaabada dimoqraadiyadda ee hadafkiisu yahay dhameystirka baab’inta hubka niyukleerka ee gacanka Kuuriya.
Bishi Marso, Taliyaha ciidanka Mareykanka ee Indo-Pacific ayaa amray in la xoojiyo dhaq-dhaqaaqyada ilaalinta iyo kor-kala socoshada Badda Yellow Sea. Waxay sare u qaaday diyaar-garoowga ciidanka Mareykanka ee gobolka si ay xaqiijiyaan caawitaanka xulufaddeenna ee dhanka amniga. Taliska ayaa sidoo kale fuliyay bandhig maraakiibta xambaara ciidamada cirka ee badda Yellow Sea si loo muujiyo joogitaanka iyo ballan-qaadka Mareykanka.
Waxaa intaasi dheer, Mareykanka ayaa ku dhawaaqay dhowr cuna-qabateyn oo cusub, si looga hortago in Kuuriyada Waqooyi ay awood u hesho adeegsiga tiknoolijiyadda iyo qalabka dalalka shisheeye ee sahli kara horumarinta barnaamijkeeda hubka ee mamnuuca ah. Xayiraadda ayaa la saaray shakhsiyaad iyo shirkado mucayin ah.
Mareykanka wuxuu barnaamijka gantaallada ee Kuuriyada Waqooyi kusoo hadal-qaaday shirarka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. Xilli Ruushka iyo Shiinaha ay fiito saareen dadaal lagu rabay in lagu soo saaro bayaan ay Qaramada Midoobay uga caalamka kula wadagaai lahey arrintan, ayuu Mareykanka ka shaqeynaya isaga oo ay bar-bartaaganyihiin dalalka dhowr ah sidi dareenka loogu jiheyn lahaa dabeecadda mas’uuliyad darrada ah ee Kuuriyada Waqooyi. “Waxaan dooneynaa inaan [Pyongyang] la xisaabtanno,” ayuu yiri Wakiilka Gaarka ah ee Mareykanka Kim.
“Muhiimadda ayaa ah inaan dooneyno inaan u caddeyno Kuuriyada Waqooyi, in dariiqa kaliyah ee horay loogu soco karo uu yahay diblomaasiyadda, ma jirto wax cadawtooyoa h oo aan u qabno Kuuriyada Waqooyi. Maamulkaan wuxuu doonayaa inuu dhageysto walaaca Kuuriyada Waqooyi isla markaana xalliyo mowduucyada adag, laakin tani waxay ku dhici kartaa kaliyah wada hadal.”